‘प्रेम गीत’ कभर गाएर को को भए उत्कृष्ट १५ ? (हेर्नुस नेमलिष्ट) « Mazzako Online
‘प्रेम गीत’ कभर गाएर को को भए उत्कृष्ट १५ ? (हेर्नुस नेमलिष्ट)
चलचित्र ‘प्रेमगीत’ले आयोजना गरेको ‘कभर सङ्ग कम्पिटिसन’को उत्कृष्ट पन्ध्रको सुची सार्वजनिक गरिएको छ । पाँच सय असी जनाले सहभागीता जनाएको यो गायन प्रतियोगीतामा युट्युवमा सर्वाधिक दर्शकबाट छानिएका अन्य उत्कृष्ट नामहरुमा सुदिप पाण्डे, दिलिपकुमार पाण्डे, सागर राई, मन्दिप उप्रेती, सागर पाण्डे, गौरब लिम्बु तथा जुनु प्रसाईं (संयुक्त), केदार भट्ट र रामप्रसाद भट्टराई छन् ।
त्यस्तै वाईल्ड कार्ड इन्ट्री मार्फत छनौट हुने पाँच जनामा मानभ शाह र श्रेया नेपाल (संयुक्त), नविन काफ्ले, पुरुषोत्तम सुवेदी, मिराज थापा र अञ्जली सुनाम (संयुक्त)र जिवेश गुरुङ छन् । यि पाँच जनालाई संगीतकार अर्जुन पोखरेलले छनौट गरेका हुन् ।
गायन क्षेत्रका लुकेका प्रतिभालाई बाहिर ल्याउन सँगै चलचित्रको प्रोमोशनका लागि समेत आयोजना गरिएको यो प्रतियोगिताको फाईनल भने एक भब्य कार्यक्रमको आयोजना गर्दै फागुन २० गते हुनेछ । उक्त दिन उत्कृष्ट एक जनाको नाम घोषणा गर्दै १ लाख धनराशीको पुरस्कार प्रदान गरिनेछ । त्यस्तै अन्य १४ जनालाई पनि गिफ्ट ह्याम्परले सम्मान गरिनेछ ।
सुदर्शन थापाले निर्देशन गरेको लभ स्टोरी सिनेमा ‘प्रेम गीत’ले दोस्रो हप्तामा पनि हाउसफुलको ब्यापार गरिरहेको छ । चलचित्रमा प्रदिप खड्का र पुजा शर्माको कामको निकै तारिफ भएको छ । सिनेमालाई सन्तोस सेनले निर्माण गरेका हुन् ।